HomeKnowledgeမိဘတိုငျးသိထားသငျ့တဲ့ ကလေးတှရေဲ့ အခကျြပွပုံ (၁၇) ခု
1. 'နာ့' ဆိုတဲ့ အသံက ဗိုကျဆာတယျလို့ ပွောတာပါ။ ကလေးတှကေို ဒီအသံကို လြှာကို အာခေါငျရှကေို့ထိပွီး လုပျတတျပါတယျ။
2. 'အာ့' ဆိုတဲ့ အသံက လတေကျခငျြတဲ့အသံပါ။ ကလေးတှရေဲ့ အစာပွှနျထဲကနေ လထှေကျခငျြတဲ့အခါ ဒီလိုအသံထှကျပါတယျ။
3. 'အို့' ဆိုတဲ့အသံက အိပျခငျြလာပွီလို့ ပွောခငျြတာပါ။ ကလေးတှကေ သမျးဝခွေငျးမပွုခငျမှာ နှုတျခမျးကိုပိတျပွီး လုပျပွတတျပါတယျ။
4. 'ဟာ့' ဆိုတဲ့အသံက နရေထိုငျရ အဆငျမပွဘေူး ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ကလေးတှမှော အထိအတှတေ့ဈခုခုက အဆငျမပွဘေူးဆိုရငျ ခွတှေလေကျတှကေို ဆတျခနဲ လှုပျပွတတျပါတယျ။ ဒီလိုလုပျရငျးနဲ့ ပါးစပျကလညျး 'ဟာ့' ဆိုတဲ့အသံ ထှကျလာတတျပါတယျ။
5. ကလေးတှဗေိုကျထဲမှာ မအီမသာဖွဈနရေငျ 'အဲ့အာ' ဆိုတဲ့အသံ ထှကျပါတယျ။ ကလေးတှရေဲ့ဗိုကျထဲမှာ နလေို့မကောငျးရငျ ညညျးတှားရငျးနဲ့ ထှကျလာတဲ့အသံပါ။
1. 'နာ့' ဆိုတဲ့ အသံက ဗိုက်ဆာတယ်လို့ ပြောတာပါ။ ကလေးတွေကို ဒီအသံကို လျှာကို အာခေါင်ရှေ့ကိုထိပြီး လုပ်တတ်ပါတယ်။
2. 'အာ့' ဆိုတဲ့ အသံက လေတက်ချင်တဲ့အသံပါ။ ကလေးတွေရဲ့ အစာပြွန်ထဲကနေ လေထွက်ချင်တဲ့အခါ ဒီလိုအသံထွက်ပါတယ်။
3. 'အို့' ဆိုတဲ့အသံက အိပ်ချင်လာပြီလို့ ပြောချင်တာပါ။ ကလေးတွေက သမ်းဝေခြင်းမပြုခင်မှာ နှုတ်ခမ်းကိုပိတ်ပြီး လုပ်ပြတတ်ပါတယ်။
4. 'ဟာ့' ဆိုတဲ့အသံက နေရထိုင်ရ အဆင်မပြေဘူး ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ ကလေးတွေမှာ အထိအတွေ့တစ်ခုခုက အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ခြေတွေလက်တွေကို ဆတ်ခနဲ လှုပ်ပြတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရင်းနဲ့ ပါးစပ်ကလည်း 'ဟာ့' ဆိုတဲ့အသံ ထွက်လာတတ်ပါတယ်။
5. ကလေးတွေဗိုက်ထဲမှာ မအီမသာဖြစ်နေရင် 'အဲ့အာ' ဆိုတဲ့အသံ ထွက်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ဗိုက်ထဲမှာ နေလို့မကောင်းရင် ညည်းတွားရင်းနဲ့ ထွက်လာတဲ့အသံပါ။